သင်၏ Samsung Galaxy ၏အသံရွေးချယ်မှုများကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နည်း။ Androidsis
Manuel Ramirez | | Samsung, လဲ tutorial
Sound Assistant သည် Samsung Galaxy အတွက်ရှိသည့်ထိုအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည် အသံရွေးချယ်မှုများကိုတိုးတက်ရန်ဖြစ်နိုင်ချေများစွာကိုဖွင့်နိုင်သည်။
အရေးကြီးဆုံးမှာ Sound Assistant ၏ထူးခြားချက်နှစ်ခုရှိပါသည်။ တစ်ခုတည်းသောအာရုံကိုရထိုက်ပါသည်။ granular အသံအတိုးအကျယ်ထိန်းချုပ်မှု ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သည့် apps များ၏အသံပမာဏကိုရွေးချယ်ပါ။ သို့သော်၎င်းသည်ဤတွင်သာတည်ရှိရုံသာမကဤဆမ်ဆောင်းအက်ပ်ကိုအစဉ်အမြဲတပ်ဆင်ရန်သင့်အားတွန်းအားပေးမည့်နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာများရှိသည်။
1 သင်၏ Galaxy ၏အသံရွေးချယ်မှုများကိုတိုးတက်စေသောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခု
2 သင်၏ Galaxy ပမာဏကိုမြှင့်တင်ရန်သို့မဟုတ်လျှော့ချရန်အဆင့်များကိုမည်သို့ပြောင်းရမည်နည်း
3 တစ် ဦး ချင်း app app volumes ကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲ
သင်၏ Galaxy ၏အသံရွေးချယ်မှုများကိုတိုးတက်စေသောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခု
ကျွန်ုပ်တို့ဖွင့်လိုသည့် volume ကိုရွေးချယ်နိုင်ခြင်းအပြင်၊ ဥပမာ YouTube ကိုဖွင့်ခြင်း၊ ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်လျှင်၎င်းသည်တက်ခြင်းသို့မဟုတ်အောက်သို့တက်ခြင်းမရှိခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့သေချာစေနိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကတည်းကဆန္ဒရှိအဆင့်မှာထားခဲ့နိုင်ဖို့ volume ကိုပိုမို granular ထိန်းချုပ်မှုရပါလိမ့်မယ် တခါတရံသူကတက်သို့မဟုတ်အများကြီးဆင်းတတ်၏.
ဒီသာမကငါတို့လုပ်နိုင်တယ် အခြေအနေတွေဖန်တီးပြီးပြုပြင်ပါ ရက်သတ္တပတ်များနှင့်အချိန်များပေါ် မူတည်၍ သတ်မှတ်ထားသောပျက်ကွက်မှုများ။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ညနေ ၆း၀၀ နာရီမှည ၁၁း၀၀ နာရီအထိကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်၌ရှိနေစဉ်အသံအတိုးအကျယ်ချိန်ညှိချက်များကိုပြောင်းလဲပါသို့မဟုတ်ညအချိန်တွင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ Sound Assistant သည်သင်ဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့ဘာမှမလိုအပ်ပါ။ သင်နှင့်အတူရနိုင်သကဲ့သို့ သင်၏ Galaxy S9 အတွက် Google Camera.
ဒါဟာခွင့်ပြု ringer ၏အစားမီဒီယာအသံအတိုးအကျယ်ကိုထိန်းချုပ် အသံအတိုးအကျယ်သော့များကိုနှိပ်သောအခါခေါ်ဆိုပါ။
granular အသံအတိုးအကျယ်အဆင့်ကိုထိန်းချုပ်ဘို့ 150 ခြေလှမ်းများ။
ကမ်းလှမ်းမှု mono အသံအထောက်အပံ့ နှင့်လက်ဝဲ / ညာဘက်ချိန်ခွင်လျှာ။
play / pause လုပ်ရန်အတွက် floating dialog ထဲရှိ app ၏ volume icon ကိုနှိပ်ပါ။
အောက်ပါရွေးချယ်မှုများရရှိနိုင်ပါသည် ဗားရှင်း 8.5 သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မားသည် Samsung အတွေ့အကြုံမှ:
အ volume ကိုမြှင့်တင်ရန်သို့မဟုတ်လျှော့ချရန်ပုံမှန်အဆင့်များ ခလုတ်ကိုနှိပ်သောအခါ၎င်းတို့သည်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
application တစ်ခု၏ audio output ကို floating volume dialog မှတစ်ဆင့် Bluetooth သို့မဟုတ်စပီကာအကြားပြောင်းလဲနိုင်သည်။
Equalizer ဆက်တင်များကိုသိမ်းဆည်း။ မျှဝေနိုင်သည်
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ Samsung ကအတွေ့အကြုံ 9.0:
စွမ်းရည် ဘယ်ဘက်မှညာဘက်ကိုအသံပြောင်း နားကြပ်ချိတ်ဆက်သောအခါ။
စွမ်းရည် ဖုန်းမြည်သံ၊ အသိပေးချက်နှင့်နှိုးစက်အသံများကိုကြားပါ တက်ကြွစွာခေါ်ဆိုမှုဖြင့်သာနားကြပ်မှတစ်ဆင့်။
သင်၏ Samsung Galaxy ထုတ်ကုန်များ၏အသံဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်ခြေများကိုတိုးတက်စေရန်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုလုံးနှင့်၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် PUBG Mobile၊ ရက်ပေါင်းကနေအသစ် update ကိုအတူမှာ သင်အမြဲကစားချင်သောအသံပမာဏ။ သင်၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုအချို့ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုယခုသင်ပြတော့မည်။
သင်၏ Galaxy ပမာဏကိုမြှင့်တင်ရန်သို့မဟုတ်လျှော့ချရန်အဆင့်များကိုမည်သို့ပြောင်းရမည်နည်း
Sound Assistant ကိုသွားတယ်။
ကျနော်တို့ဒီ option ကိုရှာပါ အဆင့်မြင့်ချိန်ညှိချက်များ အရာအဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။
လာမယ့်မျက်နှာပြင်တွင်ကျွန်တော်«အဆင့် volume ပြောင်းပါ"။
ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းသည်အဆင့် ၁၀ ကိုသတ်မှတ်သည်။ ကြိုးစားကြည့်ပါ5လိုချင်သောအသံအတိုးအကျယ်ကိုရောက်ရှိရန်နှင့်၎င်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောထိန်းချုပ်မှုရရှိရန်အတွက်နှစ်ကြိမ်ခလုတ်နှိပ်ရန်လိုအပ်သည်။
တစ် ဦး ချင်း app app volumes ကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲ
Fortnite ထားရန်နောက်ထပ်ကောင်းသည့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခု၊ ငါတို့ပြီးသားလက်ဆောင်တွေဘယ်လိုဖြစ်လိမ့်မည်ကိုသိသောအခါသီးခြားအသံအတိုးအကျယ်ဖြင့် -
ကိုနှိပ်ပါ တစ် ဦး ချင်း app ကို volumes ကို.
နောက်မျက်နှာပြင်တွင် floating icon ကိုနှိပ်ပါ။
App တစ်ခုရွေးပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင် PUBG မိုဘိုင်း။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှ ငါတို့လိုချင်တဲ့ apps အားလုံးကိုထည့်ပါ.
၎င်းကိုသင့်တော်သောချိန်ညှိနိုင်ရန်အတွက်အိုင်ကွန်၏ volume ဘားနှင့်အတူအိုင်ကွန်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့လိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတဲ့ Sound Assistant ရဲ့နောက်တစ်ခုကဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုပါ app တစ်ခုသည်အခြားတစ်ခုနှင့်တစ်ပြိုင်တည်းအသံကိုဖွင့်နိုင်သည်။ ဤနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်ထားမည်မဟုတ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် YouTube ကိုဤနည်းဖြင့်သက်ဝင်စေလျှင်၊ (WhatsApp အသံမှတ်စုကိုဖွင့်လျှင်ပင် (များသောအားဖြင့်မကြာခဏဆက်တိုက်ဖွင့်လှစ်နိုင်မည်) လျှင်ပင်၎င်းနှင့် YouTube နှစ်မျိုးစလုံးသည်အခြားတစ်ခုကိုမနှောက်ယှက်ဘဲအသံမြည်လိမ့်မည်။
ကျနော်တို့စာရင်းထဲက app တစ်ခုရွေးပါ။
ဒါကြောင့်သင်ပြီးသားကိုငါသိ၏ Sound Assistant ဖြင့်သင်၏ Samsung Galaxy ၏အသံရွေးချယ်မှုများကိုမည်သို့တိုးတက်အောင်လုပ်ရမည်နည်း, multimedia အတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့အရာများစွာကိုလုပ်နိုင်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ app တစ်ခု။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » Sound Assistant ဖြင့်မည်သည့် Samsung Galaxy မဆို၏အသံရွေးချယ်မှုများကိုမည်သို့တိုးတက်အောင်လုပ်ရမည်နည်း
အနီရောင် Trigger သူရဲကောင်းများအတွက်သူချစ်ရာသခင်၏ Orbitus ဂြိုဟ်ကိုပြန်လည်ရယူပါ